Yintoni i-EPS - Yandisa i-Polystyrene
Iyintoni i-EPS - Yandisa i-Polystyrene
Iphunga eliqinileyo nelinamandla
I-EPS ( Yandisa i-Polystyrene ) okanye abaninzi bayayazi nge-Dow Chemical Company ebizwa igama, STYROFOAM, ngumkhiqizo ogqithiseleyo kakhulu owenziwe kwimiba ye-polystyrene. Ekuqaleni kwafunyanwa nguEduard Simon ngo-1839 eJamani ngeengozi, i-EPS foam ingaphezulu kwama-95% emoyeni kunye ne-plastiki engama-5 kuphela.
Iincinci ezincinci zeplastiki ze-polystyrene zenziwe kwi-monomer styrene. I-Polystyrene ngokuqhelekileyo i- thermoplastic eqinile kwiqondo lokushisa elinokuthi liyancibilika kwiqondo lokushisa eliphezulu kwaye liphinde liqiniswe kwizicelo ezifunwayo.
Inguqu eyandisiweyo ye-polystyrene ingama-40 ngokuphindaphindiweyo umthamo we-polystyrene yokuqala.
I-Polystyrene foam isetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zezicelo ngenxa yesakhiwo sayo esihle sepropati kubandakanya ukuchithwa kwamathambo amahle, iimpawu ezifanelekileyo zokumanyanisa kunye nokuba ngumzimba onzima kakhulu. Ukususela ekusebenziseni njengempahla yokwakha kumfakela omhlophe wamathambile, i-polystyrne eyandisiweyo ineendlela ezininzi zokusetyenziswa kwezicelo. Enyanisweni, ezininzi kwi-surfboards ngoku zisebenzisa i-EPS njengenqobo yentambo.
I-EPS iyakhusela kwimvelo kwaye ngoko ayiyi kubangela nayiphi na impendulo yamakhemikhali . Ekubeni akuyi kubhenela nayiphi na inambuzane, ingasetyenziselwa lula kwishishini lokwakha. Kwakhona isisele esivaliwe, ngoko xa sisetyenziswe njengento ebalulekileyo, siya kufumana amanzi amancinci kwaye ngokubuyisela, kungekudala ukukhupha okanye ukubola.
I-EPS ihlala iqinile, inamandla kunye ne-lightweight kwaye ingasetyenziselwa njengendlela yeepaneli ezixhasiweyo, iindonga, uphahla kunye neepansi kwizakhiwo, njengezinto zokuhamba ngokubaluleka ekwakheni i-marinas kunye ne-pontoons kunye nokuzaliswa okulula kokuzaliswa kwendlela kunye nomzila wesitimela.
I-EPS iyatshitshisa iipropati ezixakekayo ezenza kube lula ukugcina nokuthutha izinto ezinokutshatyalaliswa njengamawayini, iikhemikhali, izixhobo zombane, kunye neemveliso zonyango. Ukutsalwa kwe-thermal kunye neendawo ezinqabileyo zomswakama zilungele ukupakishwa kokutya okuphekiweyo kunye nezinto ezinokutsha ezifana nezonka zokutya, iziqhamo kunye nemifuno.
I-EPS ingasetyenziselwa ukuveliswa kwee-sliders, iiplani zeemodeli, kunye ne-surfboards ngenxa yamandla ayo okwenza isilinganiselo sesisindo. Amandla e-EPS kunye neendawo eziphazamisayo zenza ukuba kube yimpumelelo ekusebenziseni kwizihlalo zabantwana kunye neenqanda zokuhamba ngeebhayisikili. Kwakhona ukuxhatshazwa kokunyanzeliswa, oku kuthetha ukuba i-EPS ilungele ukubeka impahla emaphaketheni. I-EPS nayo inezicelo kwi-horticulture kwimigangatho yee-seedy to promote aeration of the earth.
Kutheni i-EPS iyanceda?
I-laminated kalula nge- epoxy resin
Yenziwe ngeemeko ezahlukeneyo, ubukhulu, kunye nezinto zokunyanzelisa
Elula kwaye ephathekayo
Iimpawu zokumangalisa kakhulu
Iphathwe ngokunyathelisa okanye ukubhala ngokubhaliweyo.
Akunqandeki kwiimveliso zendalo
Ayikwazi ukusetyenziswa ngokudibanisa ne-MPVC-hydro-insulation foils
Ngaphambili, i-EPS yenziwe kwi-Chlorofluorocarbons eyonakalisa uhlaka lwe-ozone
Unokutsha xa udwebile ioli
Ukukhathazeka kwezeMpilo ngamayeza e-styrene agxinwa kwisiselo esishushu okanye ukutya okufakwe kwiikhopu ze-EPS
Ukusebenzisa kwakhona i-EPS
I-EPS ibuye iphinda ibuyeke kwakhona njengoko iya kuba yiplastiki ye-polystyrene xa iphinda iphindwe.
Ngamaxabiso aphezulu okuphinda ahlaziywe kwiplastiki kunye nokubalwa kweengxelo ngenxalenye engeyiyo enkulu yenkunkuma kamasipala, i-polystyrene eyandisiweyo yipolymer enobungozi. Icandelo le-EPS likhuthaza ukubuyiswa kwakhona kwezinto zokupakisha kunye neenkampani ezininzi ezinkulu ziqokelela ngempumelelo kwaye ziphinde zenze i-EPS kwakhona.
I-EPS inokuphinda isetyenziswe kwakhona ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo ezifana nokunyanzeliswa kwe-thermal kunye nokunyanzeliswa. Ingasetyenziselwa kwizicelo ezingekho mbumbulu, ikhonkrithi elula, imveliso yokwakha kunye nokubuyiswa kwakhona kwi-foam ye-EPS.
Ngeenani elikhulu lezicelo, i-EPS isetyenziswe ngenxa yoluhlu lwazo oluhle kakhulu lwepropati, ikamva le-EPS icacile. I-EPS yipolisi ebiza imali neyomncuba engcono yokuxhoma kunye neenjongo zokupakisha.
Ziziphi iFiziki yeCollision?
"Izinto eziphilayo eziphilayo" Izityalo
Ibhaktheriya: Umhlobo okanye Ukhohlakele?
I-Molecular Formula yeeKhemikhali eziNye
Iyintoni Inkqubo YesiXhosa kwiFizikiki?
I-Molarity Inkcazo kwiKhemistry
Intetho kunye neNcazelo yeAdagio
Ukufundisa izakhono zoLuntu
Yintoni eyenza iindaba zivakaliswe
Indlela yokwenza ifu kwiBhotile
Abafazi abathandathu base-Osama bin Laden
Plantagenet Queens Consort yaseNgilani
Imbali emfutshane ye-Equatorial Guinea
Keynotes kunye neNewics
Indlela Yokubhala Ingxelo Yempembelelo Yempembelelo Eya kwenza Umehluko
I-Frontal Lobes: Ukuhamba kunye noCognition
IineLaava ezine: ii-Sikh Wedding Hymns
I-Apophis: I-Rock Space eyenza i-Panic
Indlela yokufunda nokuzonwabisa kwiDream Drama
Kutheni amaBloggers Akunakukwazi ukufaka uMsebenzi weeNdaba zoLwazi
GUTIERREZ - Igama lomxholo & Umthombo
Iimpawu ze "Talladega Nights"
Udliwano-nxaxheba lwaBaqela: Indlela yokujongana neengxoxo zeengxoxo zeqela
Indlela yokufaka i-Grip Tape kwisitya se Skateboard
I-Alrightous Allure ye-Free Solo Climbing